Ogaden News Agency (ONA) – Kooxda OPDO oo Shir Qabatay & Khilaaf Hadheeyay.
Kooxda OPDO oo Shir Qabatay & Khilaaf Hadheeyay.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Naziret ee xarunta Gobolka Oromada ayaa sheegaya xiisad hor leh oo ka dhex bilaabatay kooxda OPDO ee sheegata in ay matasho qoomiyada Oromada ee mudada dheer lagu gumaysto dhulkooda.
Sida xogta aan kuhelayno kooxda ayaa shir kuqabataymagaalada Bahardar, kaas oo sida lasheegayo laga mabnuucay siyaasiyiin caan ah oo kamid ah kuwo loo adeegsan jiray xasuuqa qoomiyada Oromada, kuwaas oo siwayn uga dhex muuqan jiray siyaasada taliska wayaanaha.
Kooxda OPDO oo siwayn ugu kala aragti duwan qaabka ay kooxda TPLF u wajahday maamulka wadanka ayaa diiday in ay shirka soogalaan xubno lagu tuhunsan yahay in ay nacamle yaal uyihiin kooxda TPLF, kuwaas oo taageero wayn u muujiyay shirkii kooxda TPLF iyo go’aamadii aan macnaha lahayn ee kasoo baxayba.
Siyaasiyiintan shirka laga mabnuucay waxaa kamid ah raysal-wasaare kuxigeenkii hore ee Itoobiya, ahna safiirka hada wayaanaha u fadhiyay wadanka Canada, Safiirka gumaysiga ee wadanka Maraykanka horayna u ahaa wasiirkii arimaha gudaha ee Itoobiya iyo siyaasiyiin kale oo kooxda magac ku dhex lahaan jiray.
Kooxdan shirka loodiiday ayaa lagu eedeeyay in ay saaxiib dhaw layihiin kooxda dhiiga shacabka kamushtarta ee TPLF, waxaana laga baqay in ay si fudud ubixiyaan sirta kooxda iyo go’aamada kasoo bixi doona shir kusheegooda.
Dhinaca kale waxaa shirka buuq ka dhex dhaliyay koox kale oo taageerayaal u ah siyaasiyiinta shirka laga eryay, waxayna arintan makhraati katahay kala jabka kooxda aan awooda lahayn ee OPDO.
Kooxda OPDO oo isbahaysi la ah kooxda TPLF ayaan wax saamayn ah kulahayn go’aamada EPRDF waxaana loo adeegsadaa oo kaliya dhibaataynta shacabka Oromada.